Hargeysa: Taliyaha Booliska oo ka hadlay niman walxo qarxa lagu qabtay. | Somaliland.Org
Hargeysa: Taliyaha Booliska oo ka hadlay niman walxo qarxa lagu qabtay.
August 24, 2010	Hargeysa: Taliyaha Booliska oo ka hadlay niman walxo qarxa lagu qabtay.
“Gacanta ayaanu ku haynaa nimankaa, Alaabtuna…”
Taliyaha Booliska Somaliland….WARAYSI GAAR AH
Hargeysa (Somaliland.Org) Taliyaha ciidanka Booliska Somaliland Mr. Maxamed Saqadhi Dubad, ayaa ka hadlay niman waxyaabo ka mid ah walxaha qarxa sitay oo ay gacanta ku dhigeen.
Taliyaha Boolisku waxa uu xaqiijiyay in ciidanka Boolisku habeen hore gacanka ku dhigeen dhawr nin oo midkood dhaawac yahay, isla markaana aalado ka mid ah walxaha qarka sitay. “Gacanta ayaanu ku haynaa, waananu baadhaynaa, alaabina way jirtaa, laakiin wali baadhis baa lagu hayaa,” ayuu yidhi Maxamed Saqadhi Dubad oo xalay u waramay Wargeyska Ogaal.
Mar la waydiiyay xilliga ay qabteen iyo goobta ay ka qabteen, waxa uu sheegay inay ka qabteen guri ku yaala magaalada Hargeysa. “Waxaanu ku qabanay oo xalay (habeen hore) laga helay guri ku yaala Hargeysa. Waxay siteen waxa weeye, alaabta lagu rido (walxaha la qarxiyo), welina baadhistu way noo socotaa,” ayuu raaciyay.
Mar la waydiiyay waxa ka jira in nimanka ay qabteen uu nin dhaawac ahi ku jiray, waxa uu ku jawaabay; “Haa, wuu jiraa isna oo meesha (guriga) ayaa laga helay.”
Mr. Maxamed Saqadhi Dubad waxa kale oo la waydiiyay in nimankaasi ka tirsan yihiin kooxda ay dagaalka kula jirto Puntland ee ku dhuumanaya degaanada buuralayda fog ee gobolka Sanaag. “Ma odhan karo, ilaa aanu xaqiiqda gaadhnana waa been waxaanu ka sheegno arrintaas,” ayuu ku jawaabay. “Waa dhawr, laba/saddex nin weeye, ma badna – guud ahaan baadhis baanu ku haynaa…Gaadhiga iyagu may wadane, way la socdeen uun,” ayuu yidhi Taliyaha oo la waydiiyay tirada nimankaa ay qabteen iyo waxa ka jira inay wateen baabuur yar oo ka nooca bas-caasiga loo yaqaano ah.
Previous PostGuddi loo saaray baadhista daynta ay Xukuumaddu la wareegtay oo warbixin soo saarayNext PostXuseen Cali Ducaale Wuxuu Boobay Dadka	Blog